Sound - Izaziso - on B787 kanjani ukwenza kungasebenzi?
Umbuzo Sound - Izaziso - on B787 kanjani ukwenza kungasebenzi?
unyaka 1 10 edlule - unyaka 1 10 edlule #475 by FlyingFranz
Ngisanda ukulandwa B787 Dreamliner kusukela Ricoooo futhi uyifakile.
Nokho, ngenkathi ezindizayo, imiyalezo isexwayiso uzwakale akuveza abanikeze asebenza nabo.
Angikwazanga ukuthola kuphi uvale it.
Anginayo le nkinga nabanye aircrafts. Zimane ukubonisa izaziso esikrinini (ephansi kwesokudla.)
Noma yimuphi usizo sicela.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-10 ezedlule FlyingFranz.
unyaka 1 10 edlule #476 by Gh0stRider203
Mina mathupha ziwusizo, kodwa ngamunye bebodwa, eh?
Khona-ke futhi, zikhona izikhathi Angikho ncamashi uyakuthanda "Bitching Siphesihle" lol
akusiwona kanzima. nje Goto ifolda umsindo for ukuthi izindiza esithile, bese uhlela ifayela sound.cfg leyo ndiza, ekushintsheni lefayela ekhona ukuze "Igama lefayela = ukuthula"
Lokho KUFANELE ukukulungisa, ngicabanga ... lol musa ucaphune Me ngalolo njengoba Angikaze Uzame lokhu ngaphambili.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: FlyingFranz
unyaka 1 10 edlule #477 by FlyingFranz
Siyabonga ngokuphendula okusheshayo.
Ngizamile ... Ayikho ezinhle!
Akukho isahluko "Sound izaziso" efayeleni sound.cfg salokhu izindiza ethile.
Siyabonga kunjalo. Ngizozama futhi ngokuqhathanisa leli fayela sound.cfg namanye amafayela ezifanayo.
unyaka 1 10 edlule #478 by Gh0stRider203
Empeleni angikwazi ukundiza 787 ngoba iqiniso elisobala lokuthi kungcono awubalulekile kokuba ku VA, ngombono wami siqu. For Me, konke mayelana nokwenza imali, kanti kuyilapho 787 angase abe eduze ububanzi efanayo njengoba 772LR (okuyinto Asazi kufanele), ngeke baphathe inani elifanayo abagibeli njengoba uzobona kule screenshot .. .Iyiphi kusho $ kancane ngenxa VA.
Ngiyabonga wathola: 5
unyaka 1 10 edlule #498 by Tonny0909
Vele uthole lezo amafayela wav- ku simobjects / ezindizeni / planename / imisindo bese ususa lawo. isibonelo "callout100.wav" njll
unyaka 1 10 edlule #499 by FlyingFranz
Nokho, akunjalo umsindo ngokwalo ukuthi Kuyanyanyisa, kodwa iqiniso ukuthi asikwazi ukwenziwa singasebenzi kule izindiza ethile. Anginayo le nkinga nabanye aircrafts ngaphansi FSX.
Ngo amafayela B787, kukhona eyodwa ikhodi ubiza lezi umsindo uqaphile. ke kuyakhathaza kakhulu ngoba uma, isibonelo, ukwehla kancane kuphela emaweni kakhulu, isaziso ikhala ngisho noma izinga ilungile.
Zonke Lengangikwenta ukunciphisa izinga womsindo amafayela ahlobene ayinhloko "Umsindo" ifolda (kusuka 10000 phansi 6000.)
izinyanga 5 2 Sekwedlule izinsuku #1211 by I-FlankerAtRicoo
Sebenzisa i- [gpws] endizeni.cfg
Uma kungekho isigaba se- [GPWS] vele udale eyodwa.
Lesi sigaba sigcizelela imininingwane yesistimu yokuxwayisa eseduze.
max_warning_height Ukuphakama ngezansi lapho isixwayiso senziwa khona.
sink_rate_fpm Uma indiza idlula lesi sinani sokuzala isixwayiso senziwe.
I-excessive_sink_rate_fpm Uma indiza idlula lelizinga lokuzala, isixwayiso esiphuthumayo senziwa.
I-climbout_sink_rate_fpm Uma indiza iqala ukwehla ngenkathi isuswa, futhi idlula lelizinga lokuzala, isixwayiso
i-flap_and_gear_sink_rate_fpm Uma indiza ifika, futhi idlula lelizinga lokukhuphuka ngaphandle kwamafulegi noma igesi elandisiwe,
; // Lokhu Kuyilahla ukuthi 'ungagcini', 'ama-flaps aphansi kakhulu', njll ukuphuma kuphuma
; // Ngokuvumelana no-Rob Barendgret
i-excessive_sink_rate_fpm = -9999